Kuza kube nini ifayile yokuma? - Geofumadas
Kuza kube nini ifayile yefom
NgoJuni, 2008 ArcGIS-ESRI
Ngomzuzwana ndacinga ukuba ifom ye-axf yayiyifake indawo yefayile yesimo se-ESRI; kodwa kunokuba ziphathe njenge-geodatabase ye-ArcPad, oku kuthetha ukuba i-ESRI iya kugxininisa ekwenzeni sihlupheke ngefom ye-shp.
ubuthakathaka format Shp ubudala bayo, ukuze igcine data yakho kwifomu tabular njengoko kwakunjalo kwiminyaka phantse 20 ngaphandle kokuba uyakwazi ukuseka ubudlelwane kunye nokusasaza iifayile ezincinane ukugcina iimpawu ezahlukeneyo kunye nemigaqo data kumda wesangqa.
ESRI uye wazisa axf kwayo ifomathi esetyenziswa ArcPad ukususela 7.1 uguqulelo ingaphatha iitheyibhile enxulumene apho ziquka iimpawu, theming, uyilo kunye nezinye iimpawu ukuba dinorex ezincinane akwazi ukwenza.
Nangona abanye ziphehlelele ukukhala ezulwini lisithi: "Ngaba simele omnye Ifomathi yeengcombolo lomhlaba?" ESRI uthi ayikho ngefomathi entsha kodwa ngathi geodatabase na isakhiwo lwemithetho data lomhlaba eyakhelwe kwi Microsoft SQL Server IiBhalbhu Edition (SQLCE) ... kwisigqibo esingenangqiqo, i-geodatabase efanayo abantu abaninzi abagxekile ngokuba ne-API enenkani.
... mhlawumbi kungeyiyo ifomathi entsha kodwa idibanisa ubunzima kwi-market yemveliso yeevenkile, wonke umntu makabe wakhe omnye umgaqo-nkqubo wokusebenzisana nale fomethi.
Yaye yintoni i-axf ekufuneka iyenze?
Ukuqokelela iifayile zobume kwisiseko sedatha, iimpawu zefayile yefom egcinwe kwi dbf... kwi-BLOB (into ebalulekileyo ye-Binary) kwiikholam ezicwangcisiweyo kwisitayela se-dbf ... kwaye utsho i-dbf.
Emva koko kwelinye itafile imetadata efana nokubonakaliswa, isimboli, iifom kunye neempendulo.
Ukuqokelela kweefomfom zefomathi, kunye neziqendu zabo kunye nezinye iifom, zingabonwa njengefayile enye.
Ungakwazi kwakhona ukudibanisa ne-geodatabase, ukwamkela imimandla, i-subtypes kunye nobudlelwane ... Ndicinga ukuba imithetho ye-topological kunye ne-geoprocessing routines.
Ukuziqhelisa, umntu ephethe GPS kuya inkampu, ukwenza ulondolozo cadastral emephini (hayi shapefile elula) ngokungathi niyenzela kunye neqonga desktop yakho, ukuba ingaba kukho amalungu ingqibelelo topological uthumele iinkcukacha nge GSM ukuba kwi-database ephakathi ... awukwazi ukwenza oku? ..., sorry, ngeArpPad!
Abaninzi bakholelwa ukuba xa i-ESRI ifuna ukukhusela i-dino-shapefile yayo, ngolunye usuku iifom ze-xml (kml, gml) ziya kuyidla ziphila ... ayikukhathazeki ukuba isatshatile kuMicrosoft.
Post edlulileyo«Edlulileyo Gcina iMaphu, ukukhuphela iimifanekiso zeGoogle Earth images
Post Next Ukuthetha ngabafundisi abangaqeshwanga ...Okulandelayo "
Iimpendulo ze-6 "Kuza kube nini ifayile yefayile iphile?"
Melanco .. yima apha
Uyabona, ungazichazela ukuba ndiyakwazi ukuvula iifayile .shp kunye ne-autocad 2010 iya kubonga.
kakuhle, kubonakala ngathi
Nangona kunjalo, ifomathi apho i-geometry igcinwa ayifani efana nefayile ye-shp? Yiyo imeko kwimihlaba ye geometry ye geodatabase.
mmm, ndivele ndenze ukulungiswa, ndizigcina kwi-BLOB
Kwenzeka njani ukuba ...
"Qokelela iifayile zohlobo lweenkcukacha kwi-database, iimpawu zefayile zemilo zigcinwe kwi-dbf ... kwaye ziyibethe nge-dbf."
Ukuba usebenzisa i-database ukugcina umlo, kunokwenzeka njani ukuba ugcine ulwazi lwe-alphanumeric kwi-DBF yangaphandle ???